Muwaadiniin British ah oo dil & afduub loogu geystey xuduuda Kenya & Soomaaliya – SBC
Muwaadiniin British ah oo dil & afduub loogu geystey xuduuda Kenya & Soomaaliya
Xafiiska arimaha dibada Britain ayaa shaaca ka qaaday in muwaadiniin u dhashay wadanka Britain lagu weeraray xuduuda u dhaxeysa Soomaaliya & Keyna gaar ahaan waqooyiga deegaan xeebeedka Lamu habeeniamdiix aley.
Warar hor u dhac ah ayaa sheegaya nin dalxiis ku jirey oo da’diisu ku jirto afatameeyo la diley isla markaana xaaskiisa afduub ay u wateen kooxo hubaysan.
Xeebta tamashlaha ee weerarku ka dhacay
Booliiska Kenya nin u hadley oo lagu magacaabo Eric Kiraithe ayaa sheegay in ay socdaan hawlo baaritaan oo baaxad weyn oo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo qofka British-ka ah ee la qafaashay, waxaana uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan hawlahaasi badbaadinta ah diyaaradaha khumaatiga u kaca, doonyaha dheereeya iyo ciidamo dhulka.
“Waxaynu rajeynaynaa in ay ku guuleysano ugu yaraan inaynu helo haweenayda” ayuu yiri afhayeenkaasi.
Waxaa jira tuhun ku aadan in kooxaha weerarka geystey ay ka soo talaabeen xuduuda Soomaaliya iyadoo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo shan qof.
Goobta weerarku uu ka dhacay ayaa aheyd hotel ay degaan dadka dalxiisayaasha ah oo ku yaal deegaanka Kiwayu, waxaana uu u dhaw yahay magaalada Lamu halkaasi oo 30 mile oo qura u jirta xuduuda Soomaaliya.
Xuduuda Soomaaliya & Kenya waxaa ku xoogan xarakada Al-Shabaab waxaana diblumaasiyiintu ay ka walwal qabaan in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxdaasi, isla markaana haweenayda la qafaashay ay u gashan gashay kooxdaasi.